Lufthansa waxay duulisaa 76,000 oo qof oo ka timid gagida diyaaradaha ee Frankfurt fasaxii koowaad ee fasaxa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa waxay duulisaa 76,000 oo qof oo ka timid gagida diyaaradaha ee Frankfurt fasaxii koowaad ee fasaxa
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Billowga fasaxyada xagaaga ee Hesse: Lufthansa waxay kugula talineysaa inaad ku timaado garoonka diyaaradaha waqti wanaagsan.
Iyada oo leh 192 meelood, duulimaadku wuxuu xittaa bixiyaa duulimaadyo ka badan Frankfurt xagaagan.
Lufthansa waxay bixisaa in ka badan 1,800 xiriir toddobaadle ah, 55 boqolkiiba isku xirnaanta xilliyadii kahor-Corona.
Fikradda ilaalinta nadaafadda oo dhameystiran, oo Kooxda Lufthansa ay soo bandhigtay bilowga cudurka, ayaa sii wadaysa inay hubiso duulimaad ammaan ah.
Bilawga fasaxyada Hesse: 76,000 oo qof ayaa fasax la gala Lufthansa ka Madaarka Frankfurt dhamaadka usbuuca fasaxa. Iyada oo ku wajahan 192 meelood, waxay diyaaraduhu bixisaa xitaa duulimaadyo ka badan Frankfurt marka loo eego xagaaga 2019 iyo, in ka badan 1,800 xiriir toddobaadle ah, 55 boqolkiiba isku xirnaanta xilliyadii ka hor Corona, oo leh isbeddel koraya. Isla mar ahaantaana, gobollo badan ayaa sii wadaya inay u baahan yihiin dukumiinti dheeraad ah sida imtixaannada ama shahaadooyinka tallaalka. Sababtaas awgeed, Lufthansa waxay ku talinaysaa in rakaabkeeda ay si hordhac ah macluumaad u helaan oo ay ku yimaadaan garoonka diyaaradaha waqtigooda.
Kuwa ka walwalsan inaysan haysan shahaadooyinka saxda ah ee safarka waxaa ku hubin kara Xarunta Adeegga ee Lufthansa duulimaadyada la xushay illaa 72 saacadood ka hor bixitaanka. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara caddeynta baaritaanka, ka badbaaday cudurka COVID-19 iyo tallaallada. Xaqiijinta codsiyada gelitaanka dhijitaalka ah sidoo kale waa la hubin karaa. Tani waxay horey u hubineysaa in dukumiintiyada loo baahan yahay la heli karo. Lufthansa waxay ku talinaysaa in martideedu sii wadaan inay wataan shahaadooyinka asalka ah ee daabacan iyaga safarka, marka lagu daro cadeynta dhijitaalka ah.
Dukumiintiyadee ayaa lagama maarmaanka ah iyo halka tijaabada COVID-19 sidoo kale lagu sameyn karo safarka soo noqoshada waxaa laga heli karaa bogga Lufthansa. Safarka ku noqoshada Jarmalka, antigen is-tijaabinta iyadoo la adeegsanayo habka fiidiyowga lagu aqoonsan yahay ayaa hadda sidoo kale la aqbalay waxaana sidoo kale laga iibsan karaa internetka
Safar dabacsan, Lufthansa waxay kugula talinaysaa adeegsiga adeegyo badan oo khadka tooska ah ah oo internetka ah oo loogu talagalay soo galida iyo soogalida shandadaha. Gegada diyaaradaha ee Frankfurt, rakaabku waxay ku hubin karaan shandadooda bilaash bilaashka hada jira ilaa hada dhamaadka fasaxyada. Tani waa mid si macquul ah suurtogal u ah laga bilaabo 23 illaa laba saacadood kahor bixitaanka, haddii loo baahdo sidoo kale si toos ah loogu daro wadista gawaarida loo maro baaritaanka COVID.